ठीक छ, के बच्चा पहेली हल गर्न चाहनुहुन्छ गर्दैन? बस हामीलाई प्रत्येक उत्कट एक पहेली संग चकलेट को एक टुक्रा unwrapping, एक बच्चाको रूपमा, सम्झना, को शब्दांशहरू सामग्रीहरू पढ्न र जवाफहरू peeping छैन, विचार गर्न खोजे। वस्तुहरु "अनुमान" सबैभन्दा अप्रत्याशित कुरा थियो, तर अक्सर तिनीहरूले यस्तो Foxes, खरायो, भालू र, पाठ्यक्रम, ब्वाँसा रूपमा जनावर हुन्छन्। बच्चाहरु (उत्तर संग) को लागि ब्वाँसो बारेमा पहेलियों प्रत्येक क्यान्डी मा लगभग थिए र मजा भएकालाई तिनीहरूलाई अंदाजा।
नुकीले - यो ब्वाँसो बारेमा?
यो जनावर केही दुष्ट राक्षस तिनीहरूलाई सम्बन्धित छ किनभने ब्वाँसा बारेमा पहेलियों, छोराछोरी बीच धेरै लोकप्रिय बनेका छन्। धूर्त, निष्ठूर, bloodthirsty - सिद्धान्त, यी कविता यसलाई अहानिकारक तरिका हो। उदाहरणका लागि:
जंगल मा सबै समय, बास
को ब्रश मा रुचि लुकाउने।
उहाँले बदमास बच्चाहरु भयावह नुकीले,
र Looking एक प्वालमा लुकेको गर्नेहरूलाई।
र साँच्चै, बच्चाहरु लागि ब्वाँसो बारेमा यो छोटो सानो रहस्य एकदम स्पष्ट जवाफ छ किनभने पशु तेज नुकीले, वन र डर सम्बन्धित कि बाल्यकाल हामीलाई प्रत्येक। एकदम विपरीत गर्न जब दुष्ट - यो एक प्रारम्भिक उमेर देखि बच्चाहरु तथ्यलाई लागि कि ब्वाँसो तयार छन् भन्ने अनौठो छ। अहिलेसम्म सबै उमेरका छोराछोरीलाई सबैभन्दा लोकप्रिय को एक ब्वाँसो बारेमा रहस्यहरुलाई छन्। वा तिनीहरूले हो, तर कहिले काँही पनि एक वयस्क को वर्णन दुष्ट प्राणी मा उभर कि अनुमान थियो जवाफ बिना जनावरको छ:
खैरो र नुकीले संग,
ज्योति मा जान्छ
पाठाहरू र leverets भेट्टाउनुहुन्छ।
पछि छोराछोरीको लागि ब्वाँसो बारेमा यस्तो पहेली एक बच्चा अर्को बच्चा द्वारा सुने गरिनेछ सहमतिलाई लागि जिम्मेवार छ कि मस्तिष्क को एक निश्चित भाग ट्रिगर। खैरो कुनै पनि बच्चा canines र डर बराबर छ, ब्वाँसा राम्रो रहस्यहरुलाई छैन?
अब शायद प्रकारको वर्ण पूरा - आधुनिक कार्टून, कुनै पनि दोष पहिचान रिस पशु देखाउने प्रयास गर्दै छन्, तर साना बच्चाहरु संधै केहि मजा र आनन्दित चाहन्छु। त्यहाँ खरानी शिकारीहरु बारेमा विविध कविता को एक समुद्र छ, तर ती केही उदाहरण कोमल र कोमल जनावर, तिनीहरूलाई देखाउन:
Leverets खान थिएन, बाख्राको खान थिएन,
म तीन सुँगुरहरु खान थिएन।
चकलेट खान्छन्, जाम,
ब्यागेल्स र बिस्कुट।
तर तरिका, केही कारणले
छोराछोरी विश्वास छैन।
बच्चाहरु मा पहेली को प्रभाव
कुनै पनि अभिभावक ब्वाँसा राम्रो रहस्यहरुलाई धेरै रोचक छ, र बच्चाको मस्तिष्क क्रूरता र रिस र थप गुलाबी विश्वको बुझ्ने गर्न प्रयास गर्न प्रोग्राम छैन भन्ने कुरामा सहमत थियो। एक बच्चा हाम्रो कान्छो भाइहरूलाई बच्चाहरु भोग र राम्रो मनोवृत्ति सिकाउन भने, त्यहाँ यो हुनेछ त्यसपछि शिक्षा संग कुनै समस्या छन्। एउटै पशु र प्रारम्भिक मानव मा सानो मान्छे निश्चित गर्न साना मद्दत लागि ब्वाँसो बारेमा अर्को राम्रो कविता:
जीवन सजिलो छ,
तर्साउन लोखर्के, खरायो, ब्याजर बाध्य,
तर मित्रता बिना जनावरको के?
यो बिना तपाईं गर्न सक्छन्, तर खराब भाग्य हो!
कारण तीव्र नुकीले कुनै एक उहाँलाई विश्वास गरे।
बच्चाहरुका लागि पहेली
त्यहाँ जो मित्रता, एकाकीपनको, पट्टाइ के हो थाहा मात्र मान्छे अनुमान गर्न शक्ति छ भनेर ब्वाँसा बारेमा दार्शनिक पहेली त बोल्न, अधिक छन्। आखिर, यो जनावर संग दोस्रो सबैभन्दा प्रमुख संघ - dreary कराउनु चन्द्र मा। यस्तो बलियो र हार्डी पशु रो भने किन, रात प्रकाश देख? यो प्रश्नको जवाफ हामी फेरि पनि हुन को रहस्यहरुलाई फेला गर्न सक्नुहुन्छ।
चन्द्र मा गरजना रात
उहाँले मित्रताको तिर्खा,
आखिर, विश्वास मलाई, र उहाँले
पनि कसैले आवश्यक छ।
हरेक बच्चा छैन, र हामी जंगल, ब्वाँसो सबै पशुहरू एक आँधी बारेमा कुरा गर्दै छन् भनेर पहिलो अनुमान देखि एक वयस्क, तर यो देखिन्छ कि पनि जनावरको एक धूर्त र bloodthirsty हुन, एक प्रकारको र कोमल प्राण हुन सक्छ कि बच्चाहरु व्याख्या गर्न सम्भव छ। तिनीहरूलाई वरिपरिको विश्व यो सम्बन्ध कारण, बच्चा तुरुन्तै हामी आफ्नो लग द्वारा न्याय गर्नुपर्छ भनेर बुझ्न, तर बरु एक व्यक्तिलाई कसरी पहिचान गर्न, र त्यसपछि निष्कर्ष आकर्षित। यी कविताहरू मात्र बच्चा तार्किक सोच्न सिकाउन छैन, तर पनि, आफ्नो धारणा स्ट्रीमलाइन हुनेछ उसलाई भन पनि जंगली जनावर chuvstvavat सक्नुहुन्छ।
त्यसैले, हरेक अभिभावक ब्वाँसा बारेमा रहस्यहरुलाई गरौं भनेर सजग हुन र सबै भन्दा अक्सर अनुमान र प्रिय बच्चाहरु हुन् गर्नुपर्छ, तिनीहरूलाई मा प्रस्तुत विशेषता सुविधाहरू नुकीले, दुष्ट, भ्रूभंग र exorbitant क्रूर शक्ति सबै बे मा राख्छ कि हुँदैन को कमजोर जनावर बाँकी। मायालु आमाबाबुले पहेली को मदद, छैन क्रूरता राम्रो छ के आफ्ना छोराछोरीलाई सिकाउन पर्छ।
बच्चा राति खराब खोकी छ भने, जो आमाबाबुले के गर्नुपर्छ?
स्नान Bebi BONA लागि बिल्कुल आवश्यक छ
बच्चाहरु को लागि मुहर डायपर
ह्यामबर्गर "McDonalds"। घरमा ह्यामबर्गर कसरी बनाउने
को आविष्कार रिकर्डर
अन्ना Arlanova - थिएटर र फिल्म अभिनेत्री। जीवनी, Filmography र निजी जीवन देखि तथ्य
एक कला फारम रूपमा फर्श
पट मासु संग अनाज
रूसी गुप्तचरहरू: सूची। रूसी लेखक गुप्तचरहरू
मानव शरीर रचनाको विज्ञान: को पित्त थैली, स्थान, समारोह